Fahatongavan’ny ekipam-pirenena :: Hotsenaina makotrokotroka ny Barean’i Madagasikara • AoRaha
Ho avy anio, amin’ ny telo ora tola­kandro, eny amin’ ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato, ny ekipam-pirenena malagasy, taranja baolina kitra na Barean’ i Madagasikara avy niatrika ny fiadiana ny amboaran’i Afrika na CAN 2019, tany Ejipta. Haneho ny hafaliany hitsena amin’ny fomba mako­trokotroka azy ireo ny vahoaka malagasy iray manontolo, indrindra ireo eto Antananarivo sy ny manodidina.
Handalo eto Madagasi­kara ireo mpilalao ireo, ankoatra an’i Romain Métanire, izay hiatrika ny fifaninanana «All-Star», hiarahany amin-dry Zlatan Ibrahimovic sy Wayne Rooney ary David Beckham, any Amerika. Toy izany ihany koa i Abel Anicet Andrianantenaina, izay hiaraka amin’ny ekipany, Ludogorets Razgrad, hiatrika ny lalao miverina amin’ny lalao savaranonando eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa na ny «Uefa Champions League». Tamin’ny lalao mandroso dia niondrika teo anatrehan’ny Ferencvaros TC, avy any Hongrie, tamin’ny isa 2 noho 1, ny 10 jolay lasa teo izy ireo ary hiatrika ny lalao miverina amin’ny 17 jolay ho avy izao.
«Hiarahan’ny fitondram-panjakana sy ny Komity ho an’ny famerenena amin’ny laoniny ny Federasiona mandamina sy mandrindra ny fandaharam-potoana rehetra», araka ny voasoratra ao amin’ny pejy Facebook an’ity komity ity. Araka ny fandaminana dia hiainga eny Ivato hihazo an’i Talatamaty-Ambohibao – Digue Andohan­tapenaka – 67Ha – Andavamamba – Ampefiloha – Anosy – Antaninarenina ny lalan’izy ireo. Aorian’io dia horaisin’ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry, eny amin’ny lapan’Ambohi­tsorohitra ireo maherifo ireo, mialoha ny fiaraha-misakafo eny Iavoloha hiarahan’izy ireo hatrany amin’ity farany.
Raha ny tanjona napetraka tany am-piandohana sy ny lalana nodiavina ary ny vokatra azo dia mendrika an’ireto mpilalao ireto no
hotsenaina amin’ny fomba manetriketrika toy izao. Ankoatra ny fitsenana dia hisy ny fanomezana maribo­ninahitra fankasitrahana azy ireo avy amin’ny fanjakana malagasy.
Baolina kitra – “CAN 2019” :: Nampodian’i Tonizia am-boninahitra ny Barean’i Madagasikara
¼-dalana CAN 2019 :: Hitan’ireo teknisiana sasany ny havizanan’ireo mpilalao malagasy